दुई करोड ६० लाख नक्कली नोट प्रकरणमा फिल्म ‘लुट’का निर्माता माधव वाग्लेसहित ६ जना पक्राउ ! (भिडियोसहित) « News24 : Premium News Channel
दुई करोड ६० लाख नक्कली नोट प्रकरणमा फिल्म ‘लुट’का निर्माता माधव वाग्लेसहित ६ जना पक्राउ ! (भिडियोसहित)
काठमाडौं । प्रहरीले काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट ठूलो परिमाणमा नेपाली नक्कली नोटसहित ६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
विशेष सूचनाका आधारमा प्रहरीले काठमाडौंको गोंगबू र बागबजार तथा ललितपुरको धापाखेलबाट २ करोड ६० लाख ६३ हजार नेपाली नक्कली नोट बरामद गरेको हो । गोंगबुबाट सोमबार, धापाखेलबाट मंगलबार र बागबजारबाट आज नक्कली नोट बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
नक्कली नोटसहित ‘लुट’ फिल्म निर्माता माधवराज वाग्ले, छापाखाना सञ्चालकद्वय प्रकाश सुवेदी र विकेश नापित पक्राउ परेका हुन् । सुर्खेतका महेन्द्र बोगटी, सिन्धुलीका सुजित तामाङ र साजन तामाङलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
“काठमाडौंको चारढुंगेमा रहेको प्रिन्सेस मुभिज प्रालिका सञ्चालक माधवराज वाग्लेको कोठामा खानतलाली गर्दा १ हजार दरका नेपाली नक्कली नोट २ करोड ५२ लाख बरामद भएको हो । उनीसँगै बागबजारस्थित नवज्योति प्रिन्टिङ प्रेसका सञ्चालक प्रकाश सुवेदी र जय भोलेबाबा प्रिन्टिङ प्रेसका सञ्चालक विकेश नापित पनि प्रहरीले पक्राउ गरेकाे छ । उनीहरुले फिल्मको सुटिङका लागि नक्कली नोट छापेको बताएका छन् ।”
प्रहरीले हिजो महेन्द्र, सुजित र साजनलाई नक्कली नोटसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो । बोगटीको कोठाबाट १ लाख २० हजार तथा सुजित र साजनको कोठाबाट ७ लाख ४३ हजार नक्कली नोट बरामद गरिएको थियो ।
बोगटीले नै दिएको सूचनाका आधारमा सुजित र साजन तामाङको कोठाबाट नक्कली नोट बरामद भएको हो । नक्कली नोट उनीहरुले होटल, रेष्टुरेन्टको बिल तिर्न, यौनकर्मीलाई दिने, जुवा खेल्ने, लागू औषध किन्न प्रयोग गरेका प्रहरीले जनाएको छ ।
फिल्म ‘लुट’का निर्माता माधव वाग्लेको योजनामा काठमाडौंमै छापिन्थ्यो नोट !
प्रहरीले काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट ठूलो परिमाणमा नेपाली नक्कली नोटसहित ६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।विशेष सूचनाका आधारमा प्रहरीले काठमाडौंको गोंगबू र बागबजार तथा ललितपुरको धापाखेलबाट २ करोड ६० लाख ६३ हजार नेपाली नक्कली नोट बरामद गरेको हो । गोंगबुबाट सोमबार, धापाखेलबाट मंगलबार र बागबजारबाट आज नक्कली नोट बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।नक्कली नोटसहित ‘लुट’ फिल्म निर्माता माधवराज वाग्ले, छापाखाना सञ्चालकद्वय प्रकाश सुवेदी र विकेश नापित पक्राउ परेका हुन् । सुर्खेतका महेन्द्र बोगटी, सिन्धुलीका सुजित तामाङ र साजन तामाङलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।"काठमाडौंको चारढुंगेमा रहेको प्रिन्सेस मुभिज प्रालिका सञ्चालक वाग्लेको कोठामा खानतलाली गर्दा १ हजार दरका नेपाली नक्कली नोट २ करोड ५२ लाख बरामद भएको हो । उनीसँगै बागबजारस्थित नवज्योति प्रिन्टिङ प्रेसका सञ्चालक प्रकाश सुवेदी र जय भोलेबाबा प्रिन्टिङ प्रेसका सञ्चालक विकेश नापित पनि प्रहरीले पक्राउ परेका हुन् । उनीहरुले फिल्मको सुटिङका लागि नक्कली नोट छापेको बताएका छन् ।"प्रहरीले हिजो महेन्द्र, सुजित र साजनलाई नक्कली नोटसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो । बोगटीको कोठाबाट १ लाख २० हजार तथा सुजित र साजनको कोठाबाट ७ लाख ४३ हजार नक्कली नोट बरामद गरिएको थियो ।बोगटीले नै दिएको सूचनाका आधारमा सुजित र साजन तामाङको कोठाबाट नक्कली नोट बरामद भएको हो । नक्कली नोट उनीहरुले होटल, रेष्टुरेन्टको बिल तिर्न, यौनकर्मीलाई दिने, जुवा खेल्ने, लागू औषध किन्न प्रयोग गरेका प्रहरीले जनाएको छ ।
Posted by Sarad rai on Wednesday, May 16, 2018